Video: Sida Loogu Daabaco Bloggaaga Twitter | Martech Zone
Fiidiyow: Sida Loogu Daabaco Bloggaaga Twitter
Khamiista, Febraayo 26, 2009 Axad, Juun 27, 2014 Douglas Karr
Waxaan dhameystiray fiidiyowgaan xalay si aan u siiyo macaamiisheenna tilmaamaha ku saabsan sida loogu daabaco bartooda Twitter via Twitterfeed iyo RSS. Waxay ku habboon tahay codsi kasta oo leh quudinta RSS, markaa waxaan u maleynayay inaan halkan ku wadaagi doono sidoo kale!
Tags: u quudiso bulshadaquudiso twittertwitterfeedwordpress bulshadawordpress ilaa twitter
Seddex Furayaal oo looga Faa’iideysto Mawduucaaga
Feb 26, 2009 markay ahayd 10:33 PM
Twitter waa ma RSS!
Feb 26, 2009 markay ahayd 11:07 PM
Si sax ah uma hubo waxa bartaadu tahay, dabcan Twitter ma aha RSS. Si kastaba ha noqotee, daabacaadda RSS illaa Twitter waa hab wax ku ool ah oo lagu faafiyo bartaada (ama dhexdhexaad kale oo adeegsada quudin).
Feb 27, 2009 markay ahayd 2:20 PM
Dhibaatada i haysata ayaa ah inaysan waxba ii tarin wax faa'iido ah. Haddii aan doonayo inaan ogaado goorta aad wax ku dhajinaysid balooggaaga, waxaan iska qori doonaa quudinta RSS. In kasta oo ilaa heer ay ka jawaabeyso su'aasha ah "Maxaan sameynayaa?", Jawaabta "hadda la dhajiyay X barteyda" si ka wanaagsan ayaa looga jawaabi karaa siyaabo kale.
Aniga igama lumineyso sidaas dadka aad u tiro yar ayaa u adeegsada RSS, iyo inaad markaa ka dib gaari doontid dadka isticmaala Twitter laakiin aan RSS ku isticmaalin adoo adeegsanaya twitterfeed. Laakiin Twitter-ka sidoo kale ma aha isku-duwaha quudinta. Haddii qof uu sidan sameeyo, waxaan aad u jeclaan lahaa inaan arko inay leeyihiin laba koonto oo Twitter ah - mid bani'aadamku abuuray oo keliya, iyo mid u dhaqmaaya wadar ahaan isagoo sidoo kale muujinaya tweets ay si otomaatig ah u soo saareen. Taasi waa shaqo badan oo ku saabsan dhamaadka ilaha, in kastoo.
Sida iska cad, maadaama tani ay iga careysiiso dadka intiisa badan, waxaan sidoo kale wax ka qaban karaa dhamaadka marka la joogo oo waxaan isticmaali karaa macmiil Twitter ah oo kala saara tweets-ka twitterfeed, iyo laga yaabee qoraalka GreaseMonkey inuu ku sameeyo isla isla barta Twitter.com.
Dareen guud oo guud, in kastoo, arrintu ay tahay in adeegsiga twitterfeed si toos ah loogu dhajiyo cinwaanka boostada iyo URL-ka kuma koobna, waa xog-meta. Waan fiicnaan lahaa haddii dadku tweet gareeyaan dherer Twitter ah oo kooban oo ku saabsan qoraalka barta (ma aha jajab ama mowduuca oo keliya), ka dibna ku xira boostada oo dhan. Taasi runti waxay kudareysaa qiime, iyo wax aanan kaheli doonin inaan arko cinwaanka boostada aqristaha RSS.